Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha libonisa ukuba i-Touch Bar kunye ne-ID yokuChukumisa inokufikelela kwiKhibhodi yoMlingo | Ndisuka mac
Ngokufika kweMacBook Pro 2016 entsha yeza neTouch Bar entsha kunye nenani elingenasiphelo lezinto ezintsha ezithi zenziwe ngabaphuhlisi, zombini iiApple kunye nezicelo zomntu wesithathu, ukuze le ngcamango intsha yaziswa yiApple ifakwe kwisona siphezulu .
Nangona kunjalo, uninzi lwethu luyazibuza ukuba ngaba ibar ye-touch kunye nescreen se-OLED iya kufikelela kwezinye iikhompyuter zohlobo. Kucacile ukuba olunye usapho lweelaptops aluzukufika, le nto yile yohlulahlula olunye usapho kolunye, kodwa Namhlanje sifunde ukuba i-Bar Bar kunye ne-ID yokuChukumisa inokufikelela kwiKhibhodi yeMicrosoft kunye nayo iMac, iMac Pro kunye neMac mini.
U-Apple unelungelo elilodwa lomenzi wenguqulo entsha ye Keyboard Magic apho kucacisiwe ukuba umxholo weTouch Bar kunye ne-ID yokuChukumisa iya kuthathelwa ingqalelo ukuze ifakwe kwikhibhodi ye-Apple, ikhibhodi eza nothotho lweMac kwaye kufuneka siyithenge njengesixhobo seMac Pro kunye neMac mini . Lo nyaka unokuba ngunyaka u-Apple ekugqibeleni enze i-cylindrical Mac Pro ukuba siyazi ukuba ziyavela kwaye enye yezinto ezintsha eziza kuhambelana nekhompyuter entsha iya kuba yile.
Njengoko ubona kwimifanekiso, umbono wokubandakanya iBhar yeTouch kwiKhibhodi yobuGcisa ayikathathwa kude kube ngoku kwaye iya kuba yinto eya kuphinda yahlule iCupertino kwabanye. Siza kubona ukuba ekugqibeleni siyayibona le patent iphunyeziwe okanye hayi kwimveliso yokugqibela.
“NgoLwesine ophelileyo i-United States i-Patent kunye ne-Ofisi yoPhawu loRhwebo zapapasha uthotho lwezicelo ezithandathu zamalungelo awodwa omenzi we-Apple egubungela iTouch Bar yayo entsha yeMacBook. Amalungelo abenzi achaza ibha yokuchukumisa eyenzelwe ikhibhodi ye-iMac ekusenokwenzeka ukuba ikwathetha into eyongezelelweyo. Amalungelo awodwa omenzi wechiza ohlulwe ngokwamacandelo amabini ahlukeneyo. Iqela lokuqala ligubungela i-Apple's 'Adaptive Input Row', ethengiswa njengeBar yeTouch. Iqela lesibini liquka "amaqhosha okufikelela athintelweyo" athengiswa njengeTouch ID, eyakhelwe ngasekunene kweTouch Bar. «
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha libonisa ukuba i-Touch Bar kunye ne-ID yokuChukumisa inokufikelela kwiKhibhodi yeMilingo